Olee otú iji tọghata MOV (QuickTime) na iTunes
1 Download iTunes Video
2 Dezie iTunes Video
3 iTunes Video ka Samsung
4 tọghata iTunes
4.1 Video ka iTunes
4.2 Movies ka iTunes
4.3 MP4 ka iTunes
4.4 DivX ka iTunes
4.5 FLAC ka iTunes
4.6 WMV ka iTunes
4.7 MKV ka iTunes
4.8 AVI ka iTunes
4.9 M2TS / MTS ka iTunes
4,10 FLV ka iTunes
4.11 M4V ka iTunes
4.12 MOV ka iTunes
4.13 WAV ka iTunes
4.14 VOB ka iTunes
4.15 WMA ka iTunes
4,16 Vimeo ka iTunes
N'agbanyeghị na ị na-agba ọsọ ma ọ bụ Mac Windows usoro, MOV nwere ike ịbụ a maara video ụdị maka gị. Ọ na-izizi site Apple maka playback on QuickTime, ma ugbu a, ọ nwere ike kere site iMovie, exported si QuickTime, na ọtụtụ ndị ọzọ ụzọ. iTunes bụ a media management ngwá ọrụ na-enye anyị zuru mma ka enwe anyị music, videos, TV na-egosi, wdg,. Ọ n'ozuzu na-akwado MOV, MP4 video format na ụfọdụ mgbochi. Otú ọ dị, i nwere ike mgbe ụfọdụ na-tinye gị QuickTime MOV faịlụ ka iTunes ruru incompatibility nke, ntụgharị encoder, mkpebi, bit ọnụego, wdg na-adịghị ghọtara site gị iTunes. Ị kwesịrị tọghata ha ka ha iTunes akwado usoro na-egwu ha were were on iTunes.
Iji mee nke a, a siri ike ma kensinammuo video Ntụgharị bụ oké enyemaka. Isiokwu a ga-agwa gị ụfọdụ oké video converters ka ị mfe tọghata MOV ka iTunes. Dị na-agụ site isiokwu na-esi gị oké MOV ka iTunes video Ntụgharị.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional MOV ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Free MOV ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Online MOV ka iTunes Ntụgharị
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ a siri ike ma kensinammuo video Ntụgharị. Na ya, ị nwere ike tọghata QuickTime MOV faịlụ ka iTunes na ultrafast ọsọ na na efu àgwà ọnwụ. Ọzọkwa, ị adịghị mkpa ọ bụla oru ọzụzụ na-amalite converting gị MOV faịlụ ka iTunes, ọ bụ n'ezie dị mfe dị ka 1-2-3.
Professional video Ntụgharị: Ị nwere ike iji ya convet faịlụ na MOV, MP4, AVI, MKV, FLV, wdg ọzọ i nwere ike ozugbo setịpụrụ iPhone, iPad, Android ngwaọrụ ma ọ bụ egwuregwu console dị ka mmepụta formats na kachasị presets.
Best MOV Ntụgharị: Ọ atọghata videos na 30X kasị ọsọ na ZERO qulaity ọnwụ, na-echebekwa 100% mbụ video mma.
Ike video nchịkọta akụkọ: Ị nwere ike iji ya dị ka ihe iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro ọzọ dezie gị MOV faịlụ n'ihu akakabarede.
Great DVD burner: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a ọkachamara DVD, a na ngwa nwere ike ịbụ gị nhọrọ kasị mma. Ọ na-enwu enwu video ka DVD na ọtụtụ ndị mara mma e mere menu ndebiri.
Part 1: Bubata MOV faịlụ ka a MOV ka iTunes Ntụgharị maka Mac
1. Tinye QuickTime MOV faịlụ ka MOV ka iTunes Ntụgharị
Mbubata QuickTime MOV faịlụ n'ime MOV faịlụ ka iTunes Mac ngwa, ị nwere ike na-ịdọrọ na dobe ha ka ha na Ntụgharị, ma ọ bụ isi Njikwa menu wee họrọ "Ibu Ibu Media Files" Ibu Ibu gị MOV faịlụ.
Cheta na: ogbe akakabarede na-akwado, ị nwere ike mbubata ihe karịrị otu faịlụ na otu oge iji mee ka gị akakabarede na ịzọpụta oge.
2. Set iTunes M4V dị ka mmepụta format
Nke a Video Ntụgharị maka Mac-enye mara mma nke ukwuu format na ụdị na-presets maka Apple Devices. Ị nwere ike ịhọrọ ma n'okpuru ụzọ:
Pịa Format image n'akụkụ ọ bụla video aha na-emeghe mmepụta format window. Ke "Video" Atiya, ị ga-ahụ iTunes M4V format, dị họrọ ya dị ka mmepụta usoro.
Họrọ presets n'ihi na ụfọdụ nlereanya nke gị iPod, iPad, ma ọ bụ iPhone si "Devices" Atiya, na converted faịlụ ga-akpaghị aka tinye gị iTunes ọ bụrụ na ị ịtọ mmasị "Tinye faịlụ ka iTunes Library mgbe akakabarede". (Iji nyere ya, dị nnọọ aga menu mmanya, pịa "Mmasị"> "tọghata" ka ịnweta mmasị window, wee pịa tọghata bọtịnụ na menu mmanya na lelee nhọrọ).
3. Dezie MOV videos
Nke a na usoro-enyekwa edezi ọrụ nke na-enyere ị gbanwee mmepụta video. Common edezi ngwaọrụ na-nyere: akuku, ewepụtụ, mmetụta, watermark, ndepụta okwu (nnọọ pịa Dezie image button n'akụkụ aka nri nke ọ bụla video item).
4. Malite iji tọghata QuickTime MOV ka iTunes
Mgbe nile ọnọdụ na-aga dị ka ị na-amasị, na ihe niile na-ekpe-eme ugbu a na-pịa tọghata bọtịnụ. Nke a MOV ka iTunes Ntụgharị bụ nnọọ oru oma na akakabarede na ọganihu mmanya ga-egosi gị na pasent na fọdụrụ oge.
# 1. Free MOV ka iTunes Ntụgharị: Wondershare Video Converter Free
Nke a bụ ihe kasị mma na free MOV ka iTunes video Ntụgharị m mgbe zutere. Ọ na-ahapụ gị free tọghatara MOV ka iTunes enweghị watermark. Ọzọkwa ị nwere ike iji ya dezie videos na ibudata online videos.
Pro: a free MOV ka iTunes video Ntụgharị enweghị watermark, nnọọ mfe onye ọrụ interface
1. E nweghị ndị na presets dị. Ọ pụtara na mgbe ụfọdụ ị ga-mkpa ka parameters gị mmepụta formats aka.
2. The video akakabarede ọsọ bụghị dị ka ngwa ngwa dị ka Video Converter Ultimate.
3. Ị na-adịghị ekwe na-eji ya na-esure video ka DVD.
Nkebi nke 3: Online MOV ka iTunes Ntụgharị
Ị nwere ike iji free online video Ntụgharị n'okpuru. Ọ atọghata videos ka fọrọ nke nta ọ bụla usoro.
Top 5 Free Online 3GP ka MOV Ntụgharị
Olee otú iji tọghata MOV (QuickTime) na MKV
Olee otú iji tọghata MOV (QuickTime) na VOB
Top 10 4k video converters maka Windows na Mac
AVI Player maka iPad: Olee otú Play AVI on iPad
Olee otú SPLIT / Cut / Kpaa MKV Files na Windows / Mac
Dum ndu nke m2ts / mts codec
Olee Otú M Pụrụ Jiri Adobe Premiere Ọkụ A DVD?
Olee otú iji tọghata AVI ka SWF
Olee otú iji tọghata AVI ka MKV
Olee otú iji tọghata PowerPoint (PPT) na MPEG Video
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka mpg (Yosemite gụnyere)
10 Easy PowerPoint Nkuzi na YouTube maka Beginners
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata MOV (QuickTime) na iTunes